काठमाडौँ – केही समय पहिलेसम्म हैजा, औलो, झाडापखाला लगायतका सरुवा रोगको महामारी भएको नेपालमा अहिले भने नसर्ने रोगले जरा गाड्दै जान थालेको पाइन्छ । खाना र जीवनशैलीमा आएको परिवर्तनले नसर्ने कडा रोग लाग्ने त्यसैका कारण मृत्यु हुने नेपालीको सङ्ख्यामा दिनदिनै वृद्धि हुँदै गएकाले ग्रामीण तहबाटै नसर्ने रोगको परीक्षण गर्ने तयारी सरकारले ..
महिला होस् वा पुरुष कहिले पनि कसैसँग सेयर नगर्नुहोस् यी ९ कुरा
शुक्राचार्य महान् ज्ञानीका साथै राम्रा नीतिकार पनि थिए । शुक्राचार्यले प्रतिपादन..
अब मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क
काठमाडौँ – मिर्गौला रोगीको निःशुल्क डायलासिस गरेको सरकारले आगामी वर्ष वैशाख १ गत..
रातीको ‘ह्याङ्गओभर’ हटाउने चक्करमा यी खानेकुरा नखानुहोस्
यदि रातीको नशा उत्रिएको छैन भने भोलीपल्ट तपाईंले केही कुराहरु खानुहुँदैन । यो तप..
१८ वर्ष पार गरेपछि युवतीमा आउँछन् यी ६ परिवर्तन, थाहा पाउनुस् के हुन् ?
उमेर सँगसँगै महिलाको शरिरमा थुप्रै प्रकारको परिवर्तन आउने गर्दछ । यतिबेला थुप्रै..
बिहान ८ बज्नुभन्दा पहिले गर्नुहोस् यी काम, अत्यधिक घट्छ तौल
द युनिभर्सिटी कलेज, लण्डनको एक शोध अनुसार तौल नियन्त्रणमा राख्नका लागि शरिरको मेटाबोलिजम रेट राम्रो हुन आवश्यक छ । यसले बोसो घटाउने प्रक्रियालाई गतिशील बनाउँछ जसले शरिरमा बोसो जम्मा हुनबाट रोक्छ । यस्तो अवस्थामा यदि हामी बिहान केही क्रियाकलाप र खान पिनमा ध्यान दिन्छौं भने तौललाई निकै सजिलै नियन्त्रणमा राख्न सक्छौं । मनतातो पानीः..
काठमाडौँ – “बाहिर त कहाँ पानी पिउनु पटकपटक शौचालय जानुपर्छ, मत घरमा मात्र पानी पिउँछु” यदि हामीमध्ये कसैले यस्तो खालको बानी अपनाएका छौँ भने ख्याल राखौँ आफूले आफ्नै मिर्गौला बिगार्दै छौँ । पछिल्लो समय आम्दानीका लागि विदेशिका युवाको मिर्गौलामा समस्या देखिएपछि वर्षदिन नबित्दै स्वदेश फर्किनु परेको घटना सार्वजनिक हुन थालेको छ ।..
के तपाईं पनि पटक–पटक मोबाइल चेक गरिरहनुहुन्छ ? यसो नगर्नुहोस्, कारण यस्तो
के तपाईं पनि पटक–पटक कुनै कारण बिना मोबाइल चेक गरिरहनुहुन्छ ? यस्तो नगर्दा तपाईंलाई असजिलो महसुस हुन्छ ? यदि यस्तो हुन्छ भने विश्वास गर्नुहोस् तपाईं डिप्रेशनको शिकार हुनसक्नुहुन्छ । अमेरिकी साइकोलोजिकल असोसिएसनको एक सर्वेक्षणमा सार्वजनिक भए अनुसार ८६ प्रतिशत युवा पटक–पटक फोन चेक गर्दछन् । यसका कारण उनीहरु डिप्रेसनको शिकार हुने ग..
किन हुन्छ पाइल्स ? तपाईंलाई थाहा नभएका ७ कारण
के तपाईंलाई धेरैजसो पाइल्सको समस्या हुन्छ ? यदि छ भने, तपाईंलाई सबैभन्दा पहिला लाग्ला कि तपाईंको पाचन तन्त्रमा खराबी भएका कारण तपाईंलाई पाइल्सको समस्या भइरहेको छ । हुन त यो पनि एउटा कारण हो तर पाइल्स लाग्ने अन्य कारण पनि हुनसक्छ जसबारे सायद तपाईंलाई जानकारी छैन । पाइल्सका केहि विशेष लक्षणः गुदाद्वारबाट रगत आउनु दिसा […]
हृदयाघातले अकस्मात् ज्यान लिन सक्छ । मुटुमा हुने विभिन्न समस्याका कारण हृदयाघातको जोखिम बढ्छ । मुटुको स्वस्थ गति कायम राख्न विभिन्न कुराले अर्थ राख्छ । आखिर कस्ता व्यक्तिलाई हृदयाघातको जोखिम बढी हुन्छ ? वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. मिलनप्रकाश श्रेष्ठ भन्छन् : -तपाईंलाई सुगर छ ? सचेत हुनुहोस्, मुटुमा समस्या हुने सम्भावना तपाईंलाई ..
थाइराइड बढ्ने र घट्ने समस्या धेरै नेपालीमा देखिने गरेको छ । हुन त यो आफैँमा रोग होइन । हर्मोन उत्पादन गर्ने थाइराइड ग्रन्थिमा गडबडी भयो भने शरीरका हरेक अंगमा प्रभाव पारेर असर निम्त्याउँछ । थाइराइड ग्रन्थिले शरीरका हरेक क्रियाकलाप नियन्त्रण गरेको हुन्छ । यसबाट उत्पादन हुने हर्मोन धेरै भयो भने र ग्रन्थिले काम कम गर्‍यो […]
जान्नुहोस्, नेपाल कुन-कुन औषधिमा आत्मनिर्भर छ
नेपालममा पछिल्लो समय धेरै औषधि उत्पादन भइसकेका छन् । नेपालमा उत्पादन भई आत्मनिर्भर भएका औषधिहरू: -एन्टी एनाल्जेसिक र एन्टी इनफ्लामेटरी, एनएसएआइडिएसर अर्थो : आइबु्रप्रोफिन, एसिक्लोफेन्याक, क्लोराजोक्साजोन, डिक्लोफेनेक पोटासियम र सोडिएम, डाइथाइलामाइन, निमुस्लाइड, पारासिटामोल र ट्रामाडोल । -कार्डियोरसेरेबो भास्कुलर : एम्लोडिपिन, एट..
घरमा राखिएका यस्ता तस्बिरले बिगारिदिन्छन् तपाईंको भाग्य, रोकिदिन्छ समृद्धिको बाटो
घरको सजावटको लागि मानिसहरु धेरैजसो घरमा विभिन्न प्रकारका तस्बिर राख्ने गर्दछन् । तर धेरै मानिसलाई घरमा कस्तो प्रकारको तस्बिर राख्नुपर्छ भन्ने कुरा थाहा हुँदैन । कुनै तस्बिरले घरमा सफलता आउने गदएछ भने केही तस्बिरले घर विनासतर्फ बढ्छ । केही तस्बिरले स्वास्थ्यमा पनि समस्या बढाउने गर्दछ । घरमा कहिले पनि पानीको तस्बिर राख्नु हुँदैन ।..
घरमा मुसाको आतंकले तनावमा हुनुहुन्छ ? तपाईंको एउटा रौंले गर्नेछ सहयोग
घरमा विशेषगरी भान्छामा मुसाले आतंक फैलाएको हुन्छ जसका कारण घरका सबै सदस्य तनावमा हुने गर्दछन् । मुसाबाट पार पाउनका लागि बजारमा स्प्रे, औषधी आदि इत्यादि ल्याएर त्यसलाई भगाउने गर्दछन् तर केही दिन भित्रै मुसाले भान्छामा डेरा जमाइसकेको हुन्छ । मुसा आफूलाई वरिपरिको वातावरण अनुकुल बनाउन सिपालु हुन्छन् । घरमा मुसा हुँदा खानेुकरा, लत्ता..
बजारमा आयो शाकाहारी कण्डम
सस्टेन नेचुरल ब्रान्ड नामबाट एउटा अर्को ‘शाकाहारी’ कण्डम बजारमा आएको छ । कुनै पनि जनावरको उत्पादन प्रयोग गर्न अस्विकार गर्ने शाकाहारीका लागि उक्त कम्पनीले सस्टेन कण्डमको क्यासिन बजारमा भित्र्याएको छ । क्यासिन एउटा यस्तो मिल्क प्रोटिन हो जसका प्रयोग साधारणतया अन्य ल्याटेक्स कण्डममा हुने गर्दछ । यसका साथै यो कण्डम पर्यावरण अनुकुल ..
के तपाईं पनि पिसाब रोकेर बस्नुहुन्छ ? हुनसक्छ यी १० नोक्सानी
थुप्रै मानिसहरु आफ्नो व्यस्त दैनिकी वा कुनै अन्य कारणले घण्टौंसम्म पिसाब रोकेर बस्ने गर्दछन् । तर दुई वा तीन घण्टाभन्दा धेरै समयसम्म पिसाब रोकर राख्दा थुप्रै प्रकारका स्वास्थ्य समस्या देखिने गर्दछ । लामो समयसम्म पिसाब रोकेर राख्दा हुने नोक्सानीबारे यहाँ जानकारी दिइएको छ । मृगौला पत्थरीः पिसाबमा युरिया र एमिनो एसिडजस्ता टक्सिन तत..
के तपाईंका पार्टनरले धेरै शंका गर्नुहुन्छ ? अपनाउनुस् यी ६ तरिका
धेरैजसो सम्बन्धले एक चरण पार गरेपछि एउटा यस्तो समय आउँदा जहाँ असुरक्षाको भावना पैदा हुन्छ जुन सम्बन्धको लागि घातक हुने गर्दछ । आफ्नो सम्बन्धलाई यस्तो स्थितीबाट बचाउनका लागि तपाईंले यी ६ टिप्सको पालना गर्न सक्नुहुन्छ । कायम राख्नुहोस् सम्बन्धको न्यानोपनः सम्बन्धको सुरुवातमा तपाईं आफ्नो पार्टनरमाथि विशेष ध्यान दिनुहुन्छ तर केही सम..
काठमाडौँ – सरकारले नेपाल स्वास्थ्य संस्था गुणस्तर प्रमाणीकरण परिषद् गठन गर्ने भएको छ । प्रत्येक व्यक्तिको स्वास्थ्यसम्बन्धी गुणस्तरीय सेवा प्राप्त गर्ने संवैधानिक हकको सुनिश्चितताका लागि सो परिषद् गठन गरिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ । परिषद्लाई स्वास्थ्यसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा तथा संस्थाको मापन, मूल्याङ्कन, प्रमाणीकरण र दोषी..
फर्मा एक्सपो – २०१७ काठमाडौंमा सुरु (फोटोफिचर)
काठमाडौ –गुणस्तरीयताबाट आत्मनिर्भरतातर्फ भन्ने नाराका साथ फर्मा एक्सपो–२०१७ सुरु भएको छ । काठमाडौंको प्रदर्शनीमार्गमा शुक्रबारबाट सुरु भएको छैटौं फर्मा एक्सपोमा स्वदेशी तथा विदेशी औषधि र औषधि उत्पादन गर्ने प्रविधि तथा उपकरणको प्रदर्शनी गरिएको छ । एक सय ७ वटा स्टल रहेको प्रदर्शनीमा नेपाल, जर्मनी, भारत, चीनलगायत देशमा बनेका औषधिसँ..
कपालका लागि तेल निकै महत्वपूर्ण मानिन्छ । जसरी स्वस्थ जीवनका लागि हाम्रो शरिरलाई स्वस्थ खानेकुराको आवश्यकता पर्छ, त्यसैगरी बलियो र स्वस्थ कपालको लागि तेल कुनै स्वस्थ खानेकुराभन्दा कम होइन । त्यसकारण हप्तामा दुई पटक कपालमा तेलको प्रयोग अवश्य पनि गर्नुहोस् । तर तपाईंलाई फाइदा पुर्याउने यही तेलले तपाईंको कपाललाई राम्रो फाइदा पुर्या..
निकै छिटो तौल घटाउने यो हो जापानी तरिका, तपाईं पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनुशरण
हामी ऊर्जा पाउन केरा खान्छौं । तर जापानीहरु भने आफ्नो तौल घटाउनका लागि आफ्नो दिनको सुरुवात केरा र मनतातो पानीले गर्दछन् । विज्ञका अनुसार यसले तौल तीब्र रुपमा कम हुने र यो वैज्ञानिक रुपमा नै पुष्टि भइसकेको बताइएको छ । तर यसले तौल मात्र घट्ने नभई यसका अन्य फाइदा पनि छन् । यसकारण निकै छिटो […]
सिन्धुली – सिन्धुली अस्पतालमा १२ हप्तासम्मको निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको छ । जथाभावी गर्भपतन गराउँदा महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पर्ने भन्दै अस्पतालमा नै निःशुल्क सुरक्षित गर्भपतन सेवा सुरु भएको हो । पहिला ९ सय ९९ शुल्क लिएर सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिँदै आएको अस्पतालले फागुन १ बाट सिन्धुली अस्पतालमा निःशुल्क सुरक्..
डा. मनोजकुमार शाही , पशु चिकित्सक , पशुसेवा विभाग, हरिहरभवन, ललितपुर बर्डफ्लु पन्छीबाट पन्छीमा र पन्छीबाट मानिसमा भाइरसबाट लाग्ने महामारी रोग हो । यसलाई एभिएन इन्फ्लुन्जा पनि भनिन्छ । दाना वा पानीको माध्यमबाट यो भाइरस अत्यन्त तीव्र गतिमा फैली धेरैको ज्यानलिन सक्ने भएकाले बर्डफ्लुलाई प्राणघातक रोग पनि भनिन्छ । यो रोग सर्वप्रथम सन..
महिनावारी र गर्भवती हुँदा बताइने यी ६ झुटका वास्तविकता
हरेक महिना महिनावारी हुनु प्राकृतिक प्रक्रिया हो । तर यसबारे थुप्रै समाजमा विभिन्न प्रकारको कल्पित कथा हुने गर्दछ । महिला रोग विशेषज्ञ डा. निरजा पौराणिकताले महिनावारीको यस्ता ६ कहानी र यसको सत्यताबारे बताएका छन् । १. यदि महिनावारी समयमा भएन भने ती महिला गर्भवती भएको बुझ्नुपर्छ । यसको वास्तविकताः महिनावारी समयमा नहुने बित्तिकै म..
यस्तो पनि ! एकैदिनमा २७ पटक हर्टअट्याक
कैयौँपटक यस्ता केही चमत्कार हुन्छन्, जसलाई झट्ट पत्याउनै सकिँदैन । कहिलेकाहीँ त त्यो कुरा हो या होइन भनेर प्रमाणित गर्न नै प्रविधिको सहारा पनि लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तै एउटा घटना बेलायतमा देखिएको छ, जसलाई कसैले पनि झट्ट पत्याउन सक्दैन । र, यो हृदयाघातसम्बन्धी भएकाले पनि सुन्दैमा अचम्म लाग्न सक्छ । यो घटना सन् २०१६ को […]